Hery - Tsiky dia ampy | Serasera.org | 6
New stream for Radiovazogasy.com
2009-10-31 @ 06:23 in Serasera.org
Taorian'ny namindrana ny serveur-n'ny radiovazogasy.com dia nisy vitsivitsy ireo nitaraina fa tapatapaka foana ilay radio. Koa amin'izao dia nohavaozina sy nohatsaraina ny toerana mamoaka feo ao amin'ny Radiovazogasy.com, na ilay antsoina hoe Streaming server.
Tokony handeha malaky kokoa amin'izay ilay toerana fihainoana ny Radiovazogasy mivantana tahaka ity eto ambany eto ity.
Marihina fa raha sendra voasakana tsy afaka mihaino Radiovazogasy ianao any amin'izay misy anao any dia azonao sokafana amin'izay fihainoana mozika (Player) anananao ny adiresy http://stream.radiovazogasy.com (mampiasa port 80)
Novelomina indray ilay Live Chat ao amin'ny namana.serasera.org
2009-10-30 @ 10:10 in Serasera.org
Tany ampiandohan'ny volana oktobra, nandritra ny fanandramana ny http://namana.serasera.org dia nisy resaka mivantana tao. Izany hoe rehefa misy an'ilay eo alohan'ny solonanarana dia io no tsindrina mba hahafahana mifanoratra mivantana amin'ilay namana.
Vao nanomboka napetraka ofisialy anefa ilay izy dia nivika tanteraka ny serveur fa tsy nahazaka koa voatery najanona aloha nitadiavana vahaolana maharitra.
Amin'izao dia azo atao hoe nohafainganina kokoa ny serveur ka azo andramana mandritra ny herinandro eo indray aloha ilay resaka mivantana mandra-pitady teknolojia hafa izay maharitra kokoa.
Amin'izao dia ny namana nifidy anao ho namana manokana ihany no afaka iresahanao mivantana. Tsy ireo namana nofidinao ho namana fa ireo namana nifidy anao ho namana (marihina tsara). Matoa izany ianao mahita an'ilay sary kely eo alohan'ilay solonanarana dia efa nifidy anao ho namana iny olona iny ka azonao iresahana mivantana.
Hitako koa fa mampiasa ajax-chat koa ny RTA.mg :-) Mitovitovy ihany ny teknika ka ho hitako eo koa ny havesany.
Tantara vokarin'ny Radiovazogasy
2009-10-26 @ 08:05 in Serasera.org
Araka ny fandaharana ao amin'ny Radiovazogasy.com dia hisy tantara isaky ny alarobia voalohan'ny volana sy fahatelon'ny volana amin'ny 8 ora sy sasany alina. Ny mampiavaka kely ity indray mitoraka ity dia namana vitsivitsy ao amin'ny serasera ihany no hamelona ny tantara. Izay voaantso aloha no efa mikofokofoka ao fa mbola maro ireo nanolo-tena no mbola vao hifandaminana ho amin'ny volana manaraka. Raha ohatra moa ka mbola manam-paniriana ny hanatevin-daharana ianao dia azo atao ny mifandray amin'ny contact@radiovazogasy.com mampindrana ny feonao.
Ao Paris ao amin'ny StudioDiffusion.com no anaovana ny fakàna feo ho an'izay mazoto sy afaka amin'izany.
Raha toa koa ka manana tantara voasoratra ianao, na tantara efa voarindra dia vao mainka tsara fa mifandraisa hatrany amin'ny contact@radiovazogasy.com